Howlgallo laga sameeyay Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Abdirisak M Tuuryare	 On Apr 30, 2019
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa xalay waxaa ay howlgallo culus ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Shibis ee Gobolkan Banaadir, howlgalkaas oo lagu soo qab qabtay dad u badan dhalinyaro.
Ciidamada ayaa baaritaano ku sameynaya Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka Shaqeeya degmada Shibis iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir,waxaana sidoo kale howlgalkooda uu ahaa mid guri guri lagu baarayey.
Wararka qaar aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in dadka howlgalka lagu qabtay la geeyay Xarunta Hay’adda Dambi- baarista ee CID-da si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo.
Waa habeenkii Saddexaad oo xiriir ah oo Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ay howlgalka ka sameeyaan degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir,waxaana la sheegay in uu daba socdo howlgallo si joogto ah looga sameeyo degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir.
Weerar lagu qaaday Hoyga Sarkaal ka tirsan Ciidamada Jubbaland